निषेधाज्ञा भए पनि किन बढिरहेको छ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण ? - Deshko News Deshko News निषेधाज्ञा भए पनि किन बढिरहेको छ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण ? - Deshko News
काठमाडौँ, भदाैँ १३
नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित देखिएसँगै चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन १२० दिनपछि साउन ६ गते हटाउने निर्णय भएको थियो । साउन ६ गते नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ९९४ रहेको थियो । सो अवधिमा जम्मा ४० जनाको मृत्यु भएकामा अहिले संक्रमित तथा मृत्यु हुनेको संख्या निकै नै बढेको छ । संक्रमणको जोखिम कम गर्न विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ४ हजार ८२० जनामा संक्रमण
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले संक्रमितको संख्या घट्न अझै समय लाग्ने बताए । ‘बन्दाबन्दी नभएको भए अझै संक्रमितको संख्या बढ्थ्यो, नबढोस् भनेरै नै निषेधाज्ञा गरिएको हो । यसको असर अबको हप्ता दश दिनमा देखिन्छ भन्ने हो,’ उनले भने ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ तथा आइसोलेट तथा अस्पताल व्यवस्थापनको कार्य पहिलेभन्दा बलियो बनाइएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट